Obere akpa akwa 8 wiil dị nro ： Fabric 7302, China Lightest 8 wiil ụlọ dị nro soft Fabric 7302 Manufacturers, Suppliers, Factory - Phu Ly Bao Co. Ltd
Ị nọ ebe a : >lọ>Product>Mkpo Linta
Kachasị 8 wiil soft cabin akpa akwa ： Fabric 7302
Mkpọchi mkpọchi uwe mma risịrị: nkecha, sleek silky naịlọn mputa na gold plated zippers. A na-ejizi polyester linin na-eguzogide akwa ime ụlọ dị iche iche iji kwụ ọtọ iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị. N'azụ ogige zuru ezu iji jide ma kpuchido laptọọpụ gị.
ngagharị oge a: Nke a Kenneth Cole REACTION sophie naịlọn 15. 0-Inch laptọọpụ azu paaki nwere ọtụtụ ngwa akpa na ọtụtụ ngalaba iji mee ka njem gị niile dị mkpa ahaziri. Atụmatụ mfe-jidere n'elu ahụ. N'azụ mpịakọta na-eme ka ihe ntughari dị n'azụ, ọwa ụgbọ ala iji dabara n'ọtụtụ ngwongwo na-ebufe nke ọma maka aka na-ebu n'efu, na ihe nwere ike idozi, eriri ubu.
nhazi akụkụ: n'ihu gusset nzukọ ogige atụmatụ ihe RFID echebe flaapu n'elu ngwa n'akpa uwe, a zuru-ogologo zipa ngwa n'akpa uwe, a pen loop, na-emeghe n'elu ileghara n'akpa uwe. Ogwe ndị dị n'ihu gụnyere obere akpa mbadamba, prọts abụọ na-emeghe, na ụlọ iji jide ihe ndị ọzọ dị mkpa. N'ihu elu mputa ihu ihu na-egosipụta akpa zoro ezo zoro ezo iji chekwaa ma kpuchido akụ dị oke ọnụ.
Kachasị 8 wiil soft cabin akpa akwa ： Fabric 7301
Phu Ly Bao Co. Ltd (PLB) 71 - 73 Street Nke 1B, Binh Tri Dong B, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, Vietnam Nam
0329861789 Chen （Mr） - 0909350418 Mee (Ms)